FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA JACK-A-POO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Jack-A-Poo
Jack Russell Terrier / Alika mifangaro Poodle mifangaro
Beauregard the Jackapoo amin'ny faha-9 volana— 'Milanja 16 lbs izy., Ary zazalahy tiany ve ny manipy ny lanjany! Hendry be izy, ka tsy afaka mametraka zavatra mihoatra azy isika ... ary nianatra 'miresaka'. Manonona ny 'teny' miavaka izy (mama, mivoaka, milalao baolina). Na dia tsy dia tena anglisy loatra aza izy dia afaka mampita izay tadiaviny tokoa. Antsoinay hoe 'Beau speak.' '
Ny alika Jack-A-Poo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Jack Russell ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Registra ny mpamorona endrika = Jack A Poo
Mpanoratra International Canine Registry®= Jackapoo
Oreo the Jackapoo eo amin'ny 3 taona eo ho eo— 'Ity ilay lehilahy goavambe, Oreo Von Kirkland. Eto izy amin'ny a MANDEHANA . Nijanona aho mba hijery izay hataony amin'ny maro fanelingelenana ny valan-javaboary (andiany kely an'ny serfa dia nandalo ka nahatonga ny alika maro tao an-jaridainany lasa adala!). Fa tsy manery ny hihaona amin'ny alika hafa manenjika ny serfa (izay mety hampirehareha ny mpihaza JRT rehetra), mijanona izy ary miandrandra ahy! Nanahy aho sao ho fisty be na ho be herim-po loatra izy nefa toa tena Poodle-ly amin'ny toetrany (tsy fahita firy amin'ity fifangaroan'ny zavatra novakiako ity) ary manaiky ny hafa ho alpha. Tsy maninona izy amin'ny ankizy kely, misafidy ny 'Miala voly ianareo, hipetraka fotsiny aho hijery.' manatona rehefa mifanatrika amin'ireo olona kely mitabataba ireo. Ankafiziny ny mandeha, ny vavony ary ny sofina mandroritra fivoriana, ary mangatsiaka miaraka aminy Neapolitan Mastiff varavarana manaraka (na dia heveriko ho iray aza ny fiarahan'izy ireo ...). '
Duncan the Jack-A-Poo amin'ny faha-5 volana— 'Toa tsy manan-tsiny izy, fa raha mahafantatra momba an'i Jack-A-Poos ianao dia fantatrao tsara kokoa!'
'Ity no Jackadoodle Louis 8 volana amiko. Izy dia Poodle 3-quartre ary ampahefatry Jack Russell. Tena marani-tsaina ary mora maka tetika. Tsy mandatsaka izy, fa mampikorontana be mitsako zavatra ! Izy dia angovo mahery vaika, be fiaraha-monina ary mila fanatanjahan-tena betsaka na dia kely fotsiny aza izy . '
Pasquina, alika kely Jack-a-Poo (Jack Russell / Poodle mix) amin'ny 3 1/2 volana, milanja 4 pounds
Golden retriever akoho spaniel mampifangaro alika kely
Jack sy Moses, mirahalahy 2, taona, 12-pounds Jack-A-Poo
Hidie the Jackapoo ho alika kely amin'ny 5 volana mitafy bandana
Lexy alika vavy Jackapoo amin'ny 3 volana— 'Jack Russell no madio ny reniny ary Toy Poodle purebred ny dadany.'
Abby ilay tricolor Jack-A-Poo amin'ny faha-5 taonany— 'Abby dia milanja 6 pounds fotsiny, fa mieritreritra izy ary mihetsika toy ny alika Lehibe !!! Neny dia shortie Jack Russell (tan / fotsy) ary ny dadany dia Poodle (mainty / fotsy). Abby rahavavin'i Lexy. ' (Aseho etsy ambony ny Lexy.)
J.J. ny alik'i Jack-a-Poo amin'ny faha-5 volana— 'Tiany ny miala sasatra ao an-tratrantsika sy amin'ny toerana kely (izany hoe eo ambanin'ny seza na seza, eo anelanelan'ny kidoro sy ny loha eo am-pandriana).'
Sparky ilay fotsy sy mainty Jack-a-poo amin'ny 7 volana eo amin'ny ahitra
Hijery ohatra hafa momba ny Jack-A-Poo
Sary Jack-A-Poo 1
Sary Jack-A-Poo 2
amboa karazany mainty cur
dachshund pomeranian alika kely amidy
fifangaroan'ny collie / aussie border
rottweiler alika kely 2 volana
sary kely Cocker spaniels